Ndị na -achị China na -asị mba katuun 'adịghị mma'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ndị na -achị China na -asị mba katuun 'adịghị mma'
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọchịchị China gbara ndị na -ahụ maka ịntanetị ume ka ha mepụta ọwa na mpaghara ahụike maka oriri ụmụaka na ndị na -eto eto, gbalịkwuo mbọ na nhazi ọdịnaya na imezi mmemme, ma nyere aka wulite oghere ikuku na -akwalite uto nke ndị na -eto eto.
Ihe osise China nke nwere atụmatụ ma ọ bụ ihe nkiri nke ime ihe ike, ọbara, okwu rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na -akpali agụụ mmekọahụ.
Ndị na -enye ọrụ ịntanetị iji mepụta ọwa na mpaghara ahụike maka oriri ụmụaka na ndị na -eto eto.
Ndị na -enye ọrụ ịntanetị gbara ume ka ha nyere aka wulite ohere ịntanetị nke ga -enyere uto nke ndị na -eto eto aka.
Ụlọ ọrụ redio na telivishọn nke mba China ekwupụtala ọjụjụ zuru oke nke eserese nke 'nwere atụmatụ ma ọ bụ ihe nkiri nke ime ihe ike, ọbara, okwu rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na -akpali agụụ mmekọahụ'.
Ihe ịrịba ama kwụbara n'ime Costco na -eme ka ndị ahịa mara na ha enweghị nri na Machị 2, 2020, na Cypress, CA. (Foto nke Jeff Gritchen, Orange County Register/SCNG)
A na-agba ndị na-enye ọrụ ịntanetị mmemme web-visual anya ka ha mepụta, mbubata ma kesaa katuun nke na-egosipụta ụkpụrụ dị mma ma na-akwalite omume ọma nke ezi, nke ọma na nke mara mma, ikike mgbasa ozi China kwuru na webụsaịtị ya.
Nchịkwa ahụ gbara ndị na -ahụ maka ịntanetị ume ka ha mepụta ọwa na mpaghara ahụike maka oriri ụmụaka na ndị na -eto eto, gbalịsikwu ike na nhazi ọdịnaya na imezi mmemme, ma nyere aka wulite oghere ịntanetị na -enyere uto nke ndị na -eto eto aka.
The Onye nchịkwa redio na telivishọn mban. China.
Isi ọrụ ya bụ nchịkwa na nleba anya nke ụlọ ọrụ gọọmentị nwere na telivishọn na ụlọ ọrụ redio.
Ụlọ ọrụ redio na telivishọn nke mba na-achịkwa ụlọ ọrụ gọọmentị steeti na ọkwa mba dịka China Central Television, China National Radio, na China Radio International, yana ụlọ ihe nkiri na ihe onyonyo na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị nke azụmahịa.